Breaking News :Mudaharaad lagaga horjeedo xukumada Somaliland oo ka dhacay Borama.. May 30,2011
Borama:- Mudaharaad socday dhawr saacadood ayaa gilgilay magaalada Borama . Mudaharaadkan oo lagaga horjeeday xukumada Somaliland ayaa markii hore ka bilawday xarunta wasaarada waxbarashada gobolka Awdal ka dibna ku balaadhay suuqyada magaalada Borama halkaas oo dariiqyada magaalada lagu gubay taayiro xidhay isku socodkii gaadiidkii dhex marayey magaalada Borama.
Dadweynaha mudahaaradayey ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayeen arimo dhawra oo ay ka mid yihiin : Xukumada Silaanyo oo caadaysatey qabqabshada dhalinyrada magaalada , imtixaano saayid ah oo lagu soo rogay ardayda Form 2ka dugsiga sare ee Gobolka Awdal imtixaanaadkan oo aan gobolada kale ee Somaliland ka jirin iyo arimo kale.
Dadweynaha mudaharaadayey ayaa saxaafada gobolka Awdal u sheegay inay khaatiyaan ka joogaan maamul xumada xukumada Silaanyo waxayna dadweynuhu intaa ku dareen in dhalinyarada magaalada Borama si badheedh ah maalin walba xukumada Somaliland ay u gumaado jeelashana loogu taxaabo iyagoon wax danbi ah galabsan.
Mudaharaadkan oo kusoo beegmay wakhti uu Madaxweyne kuxigeenka Jamuuriyada Somaliland Mudane Cabdiraxman Saylici uu ku sugan yahay magaalada Borama ayaa waxa aad arkaysaa rasaas ciidamada Booliska Borama ay ku kala eryayaan dadweynaha mudaharaaday iyadoo guud ahaan wixii agab iyo qalab ee dhex yaalay wasaarada waxbarashada gobolka Awdal gabi ahaanba dadku ay jajabiyeen xafiisyada wasaarada qaarkoodna waxyeelo lasoo gaadhsiiyey.
Ka hor intaanu mudaharaadku ku fidin magaalada Borama waxa la sheegay in Madaxweyne kuxigeenka Xukumada Silaanyo Mudane Cabdiraxman Saylici iyo waftigii uu horkacayey ay ka muquurteen mudaharaadka ka dhacay Borama dibna ugu noqdeen magaalada Hargeysa goor mudaharaadku kusii fidayo magaalada.